March 2019 - Boga Wise Man
Isbedelada Geeska Ka Socda – Aragti Kooban
Waxa Qoray – Wise Man Marka laga eego dhanka danta wadamada Khaliijka. Maanta caalamkii horumaray waxa uu u jeestay in ay laga baxo isticmaalka tamarta saliida oo noqotay mid wasakh iyo dhibaato u keenta deegaanka. Loona wareego in la isticmaalo tamarta aan wasakhda lahayn sida dabka laga dhaliyo caceeda, dabaysha iwm. Dunida Galbeedku waxay […]
Jacaylkii Koobaad – Cutubka Labaad- Qaybtii 20aad
Ismaaciil Beirut nasiib wanaag isagoo maalintii xigtay Facebook iska daawanaya asxaabtiisa ayaa waxa uu arkay Amal, gabadh uu kaga baxay balse iyadu jeclayd oo sawir qurux badan soo dhigtay. Wuu sii eegay sawirka mise waa ku qoran sawirka dushiisa Enjoying Hargeisa (Hargeysaan ku baashaalayaa). Illeyn waa nin aan beryahaa arag cid raadisa oo jecel […]
Aragtidayda Ku Salaysan Somaliland Dhaqaalaheeda: Guud-mar
Koboca dhaqaalaha Somaliland kama iman doono aqoonsi u horseeda deymo iyo deeqo caalami ah oo Somaliland hesho. Koboca dhaqaalaha Somaliland kama iman doono shirkado shisheeye oo soo saara khayraadka Somaliland sida saliida iyo macdanaha kale ee SL qaniga ku tahay. Waayo? badanaa soo saarista khayraadka qaydhin sida saliida iyo macdantu waxay ku fiicantahay wadan dawlad […]
Aragtidayda Somaliland – Hordhac
Markii dadka Maraykan ku guuleysteen inay iska kiciyaan gumeystihii Ingiriis ayay shirarkii ka dambeeyey ee ay ku yagleelayeen wadan cusub waxa ay ku faaqideen aragtida wadanka ay rabaan inay samaystaan. Waxa markaa dunida dawladaha ka jira ugu awood badnaa Boqortooyada Ingiriiska laakiin nidaamkaas may rabin hogaamiyeyaashii Maraykanku waayo wuxuu ahaa nidaam boqortooyo. Waxay rabeen […]
Jacaylkii Koobaad: Cutubka Labaad: Qaybta 19aad
C/risaaq waxa uu Sagal u qoray farriin uu leeyahay iyara sug. Sagalna waxay ugu jawaabtay in ay iyaduba rabto in ay filim daawato oo uu hadhow farriimaha dib u bilaabo. C/risaaq waxa uu Sagal sii weydiiyey nooca filimka ay daawanayso. Illeyn waa laba qof oo isla helay sheekade markaasay hadana kaftan yar-yar oo ku saabsan […]
Maxay Reer Galbeedku U Daneeyaan Dimuqraadiyada?
Badanaa waxaad arkaysaa wadamada Reer Galbeedka siiba kuwa ugu waaweyn sida Maraykanka iyo Ingiriiska oo taageeraya, ku dhawaaqaya, dhiirigelinaya in wadankasta oo caalamka ka mid ahi uu ku dhaqmo oo qaato dimuqraadiyad. Taaso oo macnaheedu yahay in madaxda kuu talisaa noqoto qaar dadka metela oo doorasho iyo codayn ku yimid. Waxa kale oo dimuqraadiyadu noqonaysaa […]
Yaa Wax Kuu Sheega? Maxaase Laguu Sheegaa?
Habeen aan sii fogeyn anoo markale gaadhiga wada oo ay idaacada BBC-du ii shidan tahay ayaan is weydiiyey: Horta idaacadan BBC-da een dhegaystaa maxay ii sheegtaa? Kadib waan sii dhegaystay in muddo ah. War badan, wareysiyo, barnaamijyo ay dhegaystayaashu ka qayb gelayaan intuba way soo galeen waanay dhamaadeen. Ugu dambeyntii waxaan ogaaday waxay maantoo dhan […]
Mar Allaale markaad telefankaaga demiso ama dabku ka dhaco ayuu kusoo garaacaa. Markaad telefanka shididna waxaad ugu tagtaa farriimo uu kuu soo diray intii telefanku uu kaa dansanaa ama aad ka maqnayd. Wuxuu ku dedaalaa in uu la socdo talaabo kasta ood qaadid. Wuxuu isku dayaa in uu 100% kaa war hayo. Ku geeyo meeshaad […]
10 Ficil Ood Ku Garan Karto Inay Ku Jeceshahay
Haday farriinta telefanka (text message) sida whatsapp, messenger ama snapchat iyadu markasta kuu soo hordirto ama kula soo hor hadashaba way ku jeceshahay. Haday waxkastood tidhaahdo ku qososho, xataa wax aanad uga jeedinba inaad kaga qoslisona way ku jeceshahay. Haday su’aalo mala awaal u badan oon xidhiidhkiina khusaynin inta badan ku weydiisana way ku jeceshahay. […]
Kacaanka Aaladaha Iswada ( Robots) iyo Soomaalida
Caalamka maanta waxay dawladaha intooda badan oo kuwa horumaray iyo kuwa horumarayaaba ku jiraan u diyaar garoobayaan kacaanka aaladaha is wada (robots) iyo sidii ay dadkooda ugu diyaarin lahaayeen marka ay aaladahas koombiyuutarada ahi shaqada maanta dadku qabto ay iyagu qabtaan. Shaqooyin badan oo maanta dadku qabto oo muhiima sida dhakhtarnimada, gaadhi kaxaynta, qareenimada, gurida […]